Ndainzwa pressure build up mubeche apa matinji achinyerekedza! - Masasi eHarare
DzeBonde Ndainzwa pressure build up mubeche apa matinji achinyerekedza!
Ndainzwa pressure build up mubeche apa matinji achinyerekedza!
Handina kuziva kuti George ainge arimo already mukati, ndakanzwa voice richindideedza zvikanzi babe handei. Ndainge ndisingazive kwataiyenda or kuti ndaizodzoka kumba here that night chandaiziva ndechekuti he was taking me out and then tozotaura zvekuita after that. Ndichisvika pamota ndakatambirwa ne smile apa munhu ainge akachena, ndakavhurirwa door ndikapinda haaa treatment yacho ndainge ndiri princess chaiye that day. Akaburitsa champagne bottle ndokubva anditarisa straight mumaziso achindidirira, inini ndainge ndaikuita kunge imbwa iri pa heat kana kutsva kwandainge ndakunzwa ndakashaya kuti zvabva kupi, ropa rainge rakumhanya muviri wese beche rangu richiita kuvhita vhita but ndisingagone kuribata kana kukwenya since ndainge ndisingade kuita too forward.
Ndainzwa pressure ichiita kuita build up mubeche rangu, ndonzwa matinji angu achinyerekedza zvekuti ndaida kunzwa mboro yake ichiita kuakwizirira. Takadya that night and the only thing chandakawana was a kiss padama ndikatoona munhu akuita request Uber and in no time tainge tavakubuda kudzokera kumba, ndainyara kusumuka coz ndainge ndisingazive kuti couch yatota here nebeche rangu pamwe rakadhinda pacouch iyoyo. I really wanted kusvirwa na George but that night was going to happen. Ndakamhanya mumba ndisati ndavhura door ndakanzwa George akadeedzera kuti have a Good night, apa inini ndainge ndakutomhanyira chiVibrator changu. Too bad handina kusvirwa naGeorge but ndakazviudza kuti ndikawana mukana naye next date tinenge tirimumba achindisvira husiku hwese.